XOG: Waa maxay ujeedada Socdaalka M/weynaha DDS ee Eritrea kuwajahan? – Puntlandtimes
XOG: Waa maxay ujeedada Socdaalka M/weynaha DDS ee Eritrea kuwajahan?
September 16, 2018 W LAASCAANO
ASMARA(P-TIMES)_ Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ku sii jeeda magaalada Asmara ee dalka Eritrea, isagoo halkaas u tagaya arrimo xasaasi ah oo qeyb ka ah isbedelka muga-weyn ee ka hilaacay dalka Itoobiya.
Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida ayaa tagaya Asmara, wuxuuna kulamo la yeelan doonaa Madaxda ugu sareysa Jabhada Xoreynta gobalka Soomaali Galbeed ee ONLF, isagoo kala hadlaya sidii ay dib ugu laaban lahaayeen Jigjiga oo ay si nabad ah kusoo bandhigi lahaayeen fikradahooda.
Madaxweynaha oo ay wehliyaan xubno katirsan Ismaamulka Soomaalida iyo Heer Faderaal ayaa dooda muhiim ah la yeelan doona madaxda Jabhadda ONLF, waxaana qodobada ugu badan ee laga hadli doono kamid ah sidii isbedelkan socda looga faa’iideysan lahaa.
Soomaali Galbeed ayaa doonaysa in ay hesho Xaquuqaha ay ku leedahay dawladda Faderaalka ee Itoobiya, sidaas oo kale qorshaha la xariira dib u bedelida Dastuurka Itoobiya iyo sidii loo heli lahaa cadaalad ayaa kamid ah qodobada doodaha ugu badan ka dhalan doonaan.
Madaxda Jabhadda ONLF iyo Ismaamulka Soomaalida hogaankeeda cusub ayaan isku diidaneyn dhamaan qodobada wada xaajoodyada, iyadoo uu Madaxweynaha cusub xooga saarayo sidii loo heli lahaa ummad isku kalsoon, kana gudubta marxaladdaha adag ee maanta la dul-taagan yahay.
Xog laga helay dhinaca Madaxa ugu sareeya Jabhadda ONLF Admiral Maxamed Cumar Cismaan ayaa sheegaysa in ay diyaar u yihiin in ay saxiixaan heshiiska uu garwadeenka ka yahay Mustafa Maxamed Cumar oo ay qeyb kanoqdaan in la bedelo fikradihii hore, lana hirgaliyo heshiiska xabad joojinta ah ee ay horey dhinaceeda ugu dhawaaqday.
Itoobiya isbedel weyn ayaa ka dhacay, dhamaan Jabhaddaha kala ah OLF, GINBOT 7 oo labaduba ahaa kuwa mucaarad ah, kana soo kala jeeday Qowmiyada Oromadda iyo Axmaaradda ayaa hadda ku sii biiray dawladda uu hogaaminayo Dr Abiy Ahmed, waxayna soo dhaweyn balaaran kula kulmeen magaaladda Addis Ababa iyo deegaanadooda.